December 2017 – Trend.com.mm
ဆီးချိုရောဂါကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေ
Posted on December 31, 2017 January 2, 2018 by San Wadi Hnin
သင့်မှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်စပြုနေပြီလား။ တကယ်ကြီးဖြစ်နေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေရလား။ စိတ်မပူပါနဲ့။ သဘာဝအစားအစာတွေဟာ ရောဂါတိုင်းအတွက် ထိရောက်တဲ့ဆေးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေပြောတာကြားဖူးတယ်ဟုတ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, Health, Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ဆီးချိုရောဂါကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေ
မိန်းကလေးတိုင်း ဖုန်းထဲမှာရှိသင့်တဲ့ Application
Posted on December 31, 2017 December 31, 2017 by San Wadi Hnin
ဘာလေးလဲမှန်းလို့ရတယ်ဟုတ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ Period Guessing Application ပါ။ နာမည်လေးကတော့ Clue ပါတဲ့။ ဒီ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, Lifestyle, News, WellbeingLeaveaComment on မိန်းကလေးတိုင်း ဖုန်းထဲမှာရှိသင့်တဲ့ Application
Posted on December 31, 2017 December 31, 2017 by Shun Lei Phyo
လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို မနက်၊ နေ့လည်၊ ည ဆိုပြီး အနည်းဆုံးအစာသုံးနပ်စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းယနေ့ခေတ်အခါမှာ အစားစားခြင်းကို အချိန်ချိန်မှန်မှန် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ဘာလို့မနက်တိုင်း မနက်စာစားသင့်သလဲ
ကိုယ့်ကောင်လေးကို ဘယ်လို လက်ဆောင်မျိုးပေးရင်ကောင်းမလဲ?
ဟိုတစ်ပတ်ကကောင်မလေးကို လက်ဆောင်ပေးနည်းလေးတင်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်… OK ဒီတစ်မှာတော့ကိုယ့်ကောင်လေးကို ဘယ်လိုလက်ဆောင်လေးတွေပေးသင့်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို အနီးစပ်ဆုံးသိသလောက်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေနဲ့များသောအားဖြင့်အယူအဆကွဲပြားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းရရှိမှုပေါ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ကိုယ့်ကောင်လေးကို ဘယ်လို လက်ဆောင်မျိုးပေးရင်ကောင်းမလဲ?
ခွေးဖေဖေ ကြောင်ဖေဖေတွေကို ဘာကြောင့် ချစ်သူတော်သင့်တာလဲ
ခွေးဖေဖေကြောင်ဖေဖေတွေကို မိန်းကလေးတော်တော်များများက ချစ်သူမတော်ချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ခွေးတွေကြောင်တွေကိုပဲ သနေမယ်ထင်တာကြောင့်ပါ။ ဒီအထင်ဟာလုံးဝကြီးမှန်ကန်လှတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဘဝမှာခွေးတွေကြောင်တွေကိုအချစ်ဆုံးဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်။ သူတို့ချစ်တဲ့ အကောင်ပလောင်လေးတွေရှိနေရင်ဘာမှမလိုတော့ ဘူးလို့တွေးတတ်ကြတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, Pets, RelationshipsLeaveaComment on ခွေးဖေဖေ ကြောင်ဖေဖေတွေကို ဘာကြောင့် ချစ်သူတော်သင့်တာလဲ
ညဘက်အိပ်စက်ခြင်းဟာလူသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အနားယူမှုပါ။ ဒီလို အချိန်မှာကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ဖို့ကအမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေကညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တာ၊ အိပ်နေရင်းလန့်လန့်နိုးတာ စသဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ဘူးလား
တစ်ချို့ RS တွေဟာ ထင်ထားသလို ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ပတ်သတ်မှုမျိုး မဖြစ်လာခဲ့ကြပဲ တစ်လလောက်နဲ့ပြတ်တာမျိုး ၊ တစ်နှစ်လောက်တွဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ရည်စားဟောင်းနဲ့ပြန်ဆက်သွယ် ရင်ကောင်းမလား
Posted on December 30, 2017 December 30, 2017 by San Wadi Hnin
ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့နေရာကြီးပါ။ ကိုယ်တွေနေထိုင်တဲ့ မြို့ပြတွေသာမက လူသူအရောက်အပေါက်နည်းလှတဲ့ တောနက်နက်ကြီးတွေထဲမှာနေတဲ့လူမျိုးစုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုလူမျိုးစုတွေဟာ ဘာသာရေးအသိအမြင်အားနည်းကြပေမယ့် သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ ကိုးကွယ်မှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ အဲဒီကိုးကွယ်ရာတွေအတွက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Culture, NewsLeaveaComment on ထူးထွေဆန်းပြား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများ
လူတိုင်းဟာ အရာရာတိုင်းကိုတော့အကောင်းမြင်တက်စိတ်နဲ့ ကြည့် ဖို့ ခက်ခဲကြပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်တဲ့ အရာမှာဖြစ်ဖြစ် အခြားသူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခု ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လေးထားဖို့ခက်ခဲနေလား
ကိုယ်တို့ဘဝတွေမှာ ပျော်ရွှင်ရရေး စိတ်ချမ်းသာရေးတွေကိုပဲ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုရင် ငြင်းနိ်င်စရာရှိမယ်မထင်ဘူး။ သို့ပေတဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ ခြေကုန်လက်ပမ်းကြသွားကြတဲ့ သူတွေဟာလည်း မျက်စိရှေ့တင်ဒုနဲ့ဒေးဖြစ်လေတော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အဖြေ